Ungayilanda Kanjani iVLC Media Player ye-Mac? - Pc
Ngabe ubheke phambili ukuthola iVLC Media Player ye-mac? Yebo, namuhla usesho lwakho luzophela. Sikulungiselele okuthunyelwe okuphelele okubandakanya ukubuyekezwa okuningiliziwe kwesidlali semidiya seVLC seMac. Ngokuhambisana nalokho, sifake umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo ukufaka i-VLC kwi-Mac futhi sisho ezinye zezici ezinhle nge-VLC media player. Ngakho-ke, nika lokhu okuthunyelwe ukufundwa okugcwele ukuze wazi konke ngeVLC Media Player.
I-VLC Media Player - Imininingwane emfushane
Ngegama, kungenzeka ukuthi usuvele uyitholile leyo VLC isidlali semidiya esisetshenziselwa ukubuka amavidiyo alayishwe endaweni yakho kwi-PC yakho. Njengoba amaMacBooks esusa ama-disc drive kumamodeli awo, ingena kahle kakhulu ukusebenzisa isoftware ukukusiza ukuthi ubuke amavidiyo nezithombe.
Ifomu eligcwele le-VLC yiVideo LAN Client, futhi iyisidlali semithombo soxhumanoningi samahhala futhi esivulekile esingumthombo ovulekile esidlala amafayela amaningi we-multimedia kalula. Ungahle ungakhathazeki ngevidiyo / umsindo noma isithombe ukuthi singavuleka yini noma cha. Ungalanda isoftware ye-VLC kunoma iyiphi idivayisi mahhala njengoba isekela i-cross-platform. Isidlali se-VLC sisekela ukudlala kwe-4k ne-8k, ngakho-ke ngokuzayo, uma ufisa ukuthuthukisa isikrini se-mac yakho, usuvele unakho lokho okusekelwa yi-VLC.
Ungayifaka Kanjani iVLC Media Player Ku-MAC
Lesi sigaba sizobona izinyathelo zokulanda isidlali seVLC seMAC; zizwe ukhululekile ukulandela.
Okokuqala, udinga ukuvakashela ifayela le- indawo esemthethweni yeVLC Media Player .
Skrolela phansi uze uthole 'ukulanda i-VLC ye-MAC.'
Chofoza inkinobho ewolintshi, ethi, 'Landa i-VLC,' qiniseka ukulanda inguqulo yakamuva ukuze uthole okungcono kakhulu; njengamanje, inguqulo ingu-3.0.11.1 kusukela ngomhlaka 30/10/2020.
Faka iphakheji, bese ulungele ukuhamba. Ungayisekela futhi inkampani ngokubanikela, kepha lokho kukuwe ngokuphelele.
Izici zeVLC Media Player:
Ungomunye wabadlali bemidiya abasetshenziswa kakhulu laphaya. Kuze kudlulele nakwigciwane ngokusebenzisa ama-meme futhi kuhamba phambili uma kukhulunywa nge-UI nokusebenza. Ukuhlola uhlelo lokusebenza, vula noma iyiphi ividiyo kudivayisi yakho. Ngezansi, uzobona isidlali ongalawula ngaso ukudlala ividiyo; ibhendi ephezulu iqukethe izinketho eziningi, esizodlula kuzo kulesi sigaba. I-VLC iza nezici eziningi ezenza kube ngcono kunabanye abadlali bevidiyo. Nazi ezinye zezici zeVLC Media Player.
1. Ukulungiswa kwevolumu
Into emnandi ngesidlali semidiya seVLC ukuthi ivolumu idlula ngaphezu kuka-100%, okusho ukuthi uma ivolumu yokukhipha ividiyo ingakhanyi kakhulu, uzokwazi ukwandisa ivolumu usebenzisa isilayida, futhi i-VLC izoyinakekela futhi uthuthukise umsebenzi wakho. Uma lokho nakho kunganele, ungachofoza ekulungisweni nasekusetheni izilungiselelo ekhoneni elingezansi; lapho-ke, uzokwazi ukulungisa i-equalizer, i-compressor, ne-stabilizer kuzilungiselelo. Uzobona ama-slider, futhi ungashintsha amasethingi ngokucindezela inkinobho phezulu noma phansi.
Uma ucabanga ukuthi ividiyo yakho imnyama kakhulu noma ukukhanya kwayo akusekeli ividiyo, ungaya kwinketho yemiphumela yevidiyo bese uya kokukhethwa kukho okubalulekile bese ulungisa ukugqama kwemiphumela ye-hue, nokugcwala ngokuya ngezidingo zakho ezifanele.
3. Isihleli sevidiyo
Isebenza futhi njengomhleli wevidiyo; uthi ufuna ukusika ezinye izingxenye kuvidiyo, iya ekubukeni> Izilawuli ezithuthukisiwe> Dlala isigaba sevidiyo ofuna ukuyifaka, chofoza inkinobho ebomvu emise okombuthano ukuze uqale ukurekhoda futhi uma usuphelile qhafaza inkinobho efanayo yokumisa ukurekhoda. Kufana nokurekhoda kwesikrini kodwa kwe-MAC. Ngemuva kwalokho, udinga nje ukuthola igalari yamavidiyo, futhi uzokwazi ukubuka ingxenye ehleliwe kusuka kuvidiyo enkulu. Uzovele usike ingxenye yevidiyo kuvidiyo ekhona.
Esinye isici esihle sesidlali semidiya seVLC ukuthi uzokwazi ukushisa noma yimaphi amavidiyo, ukopishe isixhumanisi sevidiyo ofuna ukusakaza ku-VLC, bese uya kwabezindaba, okukhetha inketho Vula ukusakaza kwenethiwekhi, bese unganamathisela xhuma ngqo esikhaleni esingenalutho uma nje kuzothatha isikhathi ukulayisha, kepha kuzodlala, qiniseka ukuthi une-inthanethi esheshayo.
Usebenzisa ithuluzi, ungalanda futhi nefayela ngokurekhoda, bese ifayela levidiyo lizotholakala kusistimu yakho endaweni yangakini. Isibonelo, uma uwathanda amavidiyo ku-YouTube, ungakopisha izixhumanisi bese uzinamathisela. Uzobasakaza ngqo kusuka ku-YouTube, asikho isidingo sokusebenzisa isoftware yomuntu onobungozi ukwenza landa amavidiyo .
Uma unekhamera yevidiyo (ikhamera yewebhu), ungazithwebula futhi unikeze ukusabela kumavidiyo. Ukufinyelela inketho, iya kwimidiya, bese ukhetha ukuvula idivayisi yokuthwebula, bese ngaphansi kwedivayisi yokuthwebula ngaphansi kwegama ledivayisi, khetha igama ledivayisi yakho.
Ingasetshenziswa futhi njenge- isiguquli sevidiyo . Vele uye kwabezindaba, bese uguqula bese ugcine, uzobona imidiya evulekile ivela, bese ukhetha ifayela lemidiya ofuna ukuguqula, bese uchofoza ukuguqula bese ulondoloza ngemuva kwalokho ongakhetha kukho okuningi ngaphansi kwesibhengezo sezilungiselelo, ungakwazi futhi guqula ku-mp4 , OGG, kanye netoni yamanye amafomethi wevidiyo.
7.Ukwesekwa kwemibhalo engezansi
Ungangeza nemibhalo engezansi kunoma yisiphi isiqeshana, iya enkethweni engeza engezansi, landa ifayela le-SRT lemibhalo engezansi bese ukhetha inketho lapho kuvela okuvelayo; ngemuva kokungezwa imibhalo engezansi, kuzokhonjiswa umyalezo ekhoneni eliphezulu kwesokudla. Ungaphinda uchofoze kwesokudla kuvidiyo.
7. Amavidiyo amaningi kuhlelo lokusebenza olufanayo
Ungadlala futhi amavidiyo amaningi kumathebhu ahlukahlukene ngokwethula uhlelo lokusebenza futhi, bese uhudula bese uphonsa ifayela ofuna ukulibuka ku-VLC. Lokhu konga isikhathi esiningi nomzamo ngoba awudingi ukuthola ividiyo yakho kuyo yonke inkomba.
Uma ufuna ukuthatha izithombe-skrini ezesabekayo nezipholile ezivela ku-VLC, ungakwenza lokho ngokuchofoza inketho yevidiyo bese uchofoza ukuthatha isithombe-skrini.
9. Ukufinyelela okusheshayo
Kukhona inketho yokufinyelela okusheshayo futhi lapho uzokwazi ukufinyelela khona ngokuchofoza kwesokudla kwigundane lakho. Kungaba lula kakhulu kuwe ukuthola izinketho zakho ozifunayo bese uzisebenzisa khona manjalo. Izinto ezifana nokushintsha isilinganiso sesici sevidiyo zingenziwa ngokufinyelela imenyu esheshayo.
· Isoftware izokunikeza izinketho okungekho esinye isidlali sevidiyo esizokunikeza ukuhlela ividiyo ngesikhathi, ukusakazwa kwevidiyo oku-inthanethi, amathuluzi athuthukile ukulungisa isipiliyoni sakho sokubuka.
· Ingenye ye-software yevidiyo etholakala kakhulu futhi efunwa kakhulu emakethe.
· Ikuvumela ukuthi ulande okuqukethwe ngqo kudivayisi yakho ngaphandle kokukhathazeka nganoma yini.
· Ine-interface yomsebenzisi ehlanzekile futhi kulula ukuyisebenzisa futhi ifinyeleleka kalula.
· Inenketho enhle kakhulu ye-audiophile.
· Ithola izibuyekezo ezijwayelekile nezimagqabhagqabha zokuphepha.
· Uma ivolumu ikhonjwe yafika kuma-200%, ithikameza ikhwalithi yomsindo.
Ngemuva kokufunda le ndatshana, sethemba ukuthi kungenzeka ukuthi uthole umbono wokuthi iyini i-VLC. Inezinzuzo eziningi ngaphezu kwabanye abadlali bevidiyo bendabuko; ngaphezu kwalokho, yisidlali sevidiyo esidume kakhulu ngokusekelwa kuze kufike ku-8K impela ikusasa, akunjalo? Ngakho-ke, ulindeni? Landela izinyathelo bese ulanda uhlelo lokusebenza lwe-Mac?
Uma unemicabango noma imibuzo maqondana neVLC kwi-Mac, sazise ebhokisini lokuphawula elingezansi.
ungayilungisa kanjani i-youtube ayisebenzi
induku yomlilo noma ibhokisi le-android
udlala kanjani i-minecraft mahhala akukho ukulandwa
izingosi ze-movie ze-hd ezihamba phambili online
ungayabela kanjani enye inqama ukuze ubhale ngaphezulu